Global Voices teny Malagasy » Mozean-javamaneno nentin-drazana tokana ao Nepal miady aman’aina hanavotana zavamaneno tsy fahita firy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Aogositra 2019 5:54 GMT 1	 · Mpanoratra Sanjib Chaudhary Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsimo, Nepal, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Tantara, Teratany, Zavakanto & Kolontsaina
Raha tsy mitsahatra ny ifamezivezen'ny olona sy ny fiara mandritra ny andro ny olika (rond-point) ao Tripureshwor , Nepal, dia an-tongotra minitra vitsivitsy miala avy eo amin'io arabe mikorataba io dia efa mangina sy tony ny ao an-tempoly Tripureshwor Mahadev , iray amin'ny tempoly lehibe indrindra ao amin'ny Lemaka Kathmandu. Ao anatin'ny faritr'io tempoly io misy mozea  tsy dia malaza loatra mampiantrano ireo zavamaneno nentin-drazana Nepali nangonina manerana an'i Nepal. Na dia manan-danja ara-javakanto aza ny angon'ny mozea, dia miatrika ady ara-pitsarana izy amin'izao fotoana izao mba hisokafan'ny varavarany ho an'ny daholobe. Raha vao resy eny amin'ny fitsarana ny mpanorina ny mozea, dia tsy maintsy mamindra toerana ny mozea izy.
Efa hatramin'ny taona 1995 no nanangonan'i Ram Prasad Kadel, mpanorina sy mpanangona ao amin'ny mozea zavamaneno  ary niarahany tamin'ny vadiny Nanda Sharma ny nanaovana izany. Noho ny fankamamiany no nahatonga azy hivezivezy amin'ny distrika 77 misy ao Nepal, ary zavamaneno 650 ny zavamaneno fampiasam-bahoaka voaangony amin'ny karazany 1350 mbola misy amin'izao fotoana izao. Na izy mividy zavamaneno tranainy izay tsy miasa na mampanamboatra avy ao amin'ny mponina ao an-toerana izy. “Tsy mividy zavamaneno mbola ampiasaina any an-tanàna izahay,” hoy izy niresaka tamin'ny Global Voices. “Raha entinay ny zavamaneno mbola miasa dia inona indray no hotendren-dry zareo ary ahoana ny itohizan'ny fomban-drazana?”
“Tsotra dia tsotra ny zavamaneno nentin-drazanay,” hoy izy nanampy. “Avy amin'ny hita eny amin'ny manodidina no nanamboarana azy ireny, ary ny hira dia nakana aingam-panahy avy amin'ny feon'ny orana, ny fitsokan'ny rivotra, ny meon'ny saka ary ny siotsiokan'ny vorona, ankoatra ny hafa izay tsy voatanisa.” Ary manana ny taratra avy amin'ny famolavolana ny zavamaneno ihany koa ny natiora. Ohatra, misy ireo zavamaneno mitovy amin'ny lazaina ao an-toerana hoe harro (black myrobalan ), voa-na Rudraksha  (voam-bavaka), voa-na ôrza ary eny fa na hatramin'ny rambon'omby aza. Hiti Manga, zavamaneno namboarina endrika araka ny teten-drano hita tao Kathmandu, mamoaka feo mitovy amin'ny rano mameno ny tavy avy amin'ny rano mitete.
Na izany aza tsy araka ny tokony ho izy ny mozea. Ratsy bika ireo zavamaneno aseho ary vitsy koa no mitsidika ilay mozea, Ny ankamaroan'izy ireo dia manao fikarohana momba ny ethnomusicology. Ankoatra ny fampanantenany, niangavian'ny Guthi Sansthan , toeram-pianarana iray mahaleotena nitokisana hiandraikitra (hiambina) ireo vakoka ara-pivavahana, kolontsaina ary sosialy ao amin'ny firenena, i Kadel hiala amin'ny toerana. Araka ny tatitra , nanaiky ny Sansthan hampanofa ny fanana-mifakany amin'ny Oniversiten'i Kathmandu, ary ity farany ity indray no mikasa hampiantrano ny departemantan'ny hira ao. Nametraka fitoriana ho fanoherana izany ao amin'ny Fitsarana ao amin'ny distrikan'i Kathmandu i Kadel.
Raha mbola mitohy ny ady ara-pitsarana, dia feno ny fotoanan'ny ekipan'i Kadel amin'ny fandraketana sy amin'ny famadihana ho nomerika ny hiram-bahoaka Nepali. “Manantena izahay ny hanolotra ny mozea, izay ho lasa FTMF (ONG), na ho an'ny Governemantan'i Nepal  na ho an'ny Oniversiten'i Tribhuvan ,” hoy izy. Na dia mila fotoana sy vola aza izy hamindra ireo fitaovana saropady ao amin'ny mozea ireo, dia manantena izy fa tsy mila hanao izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/08/17/142644/
 tempoly Tripureshwor Mahadev: http://www.rajunepal.com/photography/shiva_temples_of_nepal/album/tripureshwor_mahadev#sthash.q4Gcob2R.dpbs
 Governemantan'i Nepal: https://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_Nepal
 Oniversiten'i Tribhuvan: https://tribhuvan-university.edu.np/